Toetra mampiavaka sy fikarakarana ny saka Chocolate York tsara tarehy | Noti saka
York Chocolate saka, ilay volony te-ho pantera
Raha tia saka manana volo mainty ianao ary maniry hanana iray izay manana palitao lava sy malefaka ihany koa, ny karazany York Chocolate mety ho ilay tadiavinao io. Ity volom-borona antonony ity dia manana endrika marani-tsaina, tena taratry ny toetrany.
Mpanaingo volo izy izay tia mianatra zava-baovao ary, toy ny felines an-trano rehetra, ho ivon'ny fiheveran'ilay olona tianao indrindra.
1 Fiandohana sy tantaran'ny saka Chocolate York
4 Fikarakarana saka Chocolate Chocolate
5 Ohatrinona ny saka York Chocolate saka?
6 York Chocolate Cat Photos
Fiandohana sy tantaran'ny saka Chocolate York
Tamin'ny taona 80, saka iray nantsoina hoe Blacky, nipetraka tamin'ny toeram-pambolena any New York, no niampita ny lalana niaraka tamin'i Smokey saka mania. Ireo kittens teraka dia tsy maintsy ho tsara tarehy, indrindra fa ny volom-borona misy sokola. Ity volom-bolo kely ity dia nahasarika ny sain'ny olombelona, ​​ka nampahalala azy ny manodidina azy izy.
Araka izany, nanjary nalaza be izy tsikelikely, ankoatry ny hatsaran-tarehiny be fitiavana sy tsara fanahy izy. Tamin'ny faran'ny taona 80 dia efa maro ny kopian'ity karazany ity, ary tamin'ny taona 90 dia natao ny fenitra. Androany dia eken'ny fikambanana CFF sy ACFA ho toy ny karazany izy io.
York Chocolate Cat Volom-bolo antonony izy io, milanja 5-6kg ny lahy ary kely kokoa ny vavy. Ny vatana dia arovan'ny volon-doko miloko sôkôla lava be dia be. Mety misy tasy fotsy eo amin'ny tarehy na rambo.
Biby matanjaka izy io, manana hozatra tsara hozatra, ary mifanaraka tsara. Somary lava ny lohany. Maitso, volontany na volamena ny maso, ary maranitra ny sofina.
Manana toetra tsy mampino ilay maherifonay. Liana be izy, mampihomehy ary manan-tsaina. Ankafiziny ny maka hatory ary milalao miaraka amin'ireo akaiky azy. Tiany ihany koa ny manafosafo sy manala baraka; na dia tsy maintsy fantatsika aza fa natokana ho an'ny olon-tsy fantatra izy, saingy tsy misy tsy vitan'ny saka saka ny mamaha 😉.
Manana haavon'ny angovo avo lenta, noho izany dia ilaina ny manokana fotoana ho azy hahafahanao mandoro azy ary milamina.
Fikarakarana saka Chocolate Chocolate
Sary - Petsionary.com
Ny maha biby mihinana hena ilaina ny manome sakafo feno proteinina biby tsy misy serealy, na omeo sakafo voajanahary kokoa izy toy ny Yum Diet ho an'ny saka, Summum na mitovy aminy.
Isan'andro tsy maintsy kosehinao amin'ny karatra izy, ary diovy isan-kerinandro ny maso sy ny sofina amin'ny lamba madio. Aza manasa azy, satria tsy mila an'io izy (raha tsy mijanona intsony izy amin'ny fikolokoloana na lasa maloto be loatra izy ireo, mazava ho azy).
Isan'andro dia mila milalao miaraka aminy ianao mba hahafahany manao fanatanjahan-tena sy manakana azy tsy hanao korontana ao an-trano. Mba hanaovana izany dia afaka mividy kilalao amin'ny fivarotana famatsiana biby ianao, na manamboatra azy ireo amin'ny boaty na kofehy.
Sary - Wikipets.es
Na dia karazany mankafy fahasalamana tsara aza izy io, isaky ny miahiahy ianao fa tsy salama dia mila mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby ho azy nohadihadiana ary omena ny fitsaboana sahaza azy. Ho fanampin'izany, tsy maintsy mandeha any amin'ny manam-pahaizana manokana koa ianao hametraka ny microchip, ny vaksiny ary ho an'ny inona castre raha tsy tianao ny mampitombo azy.
Toy izany koa, zava-dehibe ny hanesoranao ny fipetrahana amin'ny fasika, ary ny hanadiovanao ny fitoerany indray mandeha isan-kerinandro na isam-bolana. Ireo fepetra ireo dia hanampy amin'ny fiantohana ny fahasalaman'ny totozy, ary koa ny fiadanan-tsaina.
Ohatrinona ny saka York Chocolate saka?
Tapa-kevitra tanteraka ve ianao ny hahazo alika kely Chocolate York? Raha izany dia voalohany Zava-dehibe ny, raha miara-miaina amin'ny olona marobe ianao, dia anontanianao izy ireo raha te-handry ao an-trano koa izy ireo. Ary rehefa entina amina trano izay tsy anarahan'ny mponina rehetra azy ny biby dia mora ny hisian'ny olana ... ary ilay volom-borona no saika mivoaka ratsy hatrany.
Noho izany, raha tsy efa tapaka ny fanapahan-kevitra teo amin'ny rehetra, dia ho tonga ny fotoana hanombohana mitady toerana honeran'ny karazany. Raha vantany vao hitanao izany dia tokony ho fantatrao fa tsy misy alika kely hisaraka amin'ny reniny farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny valo herinandro, satria mbola kely izy dia mila misotro ronono ary koa, hianatra hitondra tena toy ny saka.
Raha ny vidiny, eo ho eo izy io 800 euros. Raha hividy izany any amin'ny magazay biby ianao, dia mety ho ambany ny vidiny.
York Chocolate Cat Photos
Ny York Chocolate dia volom-borona izay mahafinaritra ny mandinika. Manana fiatraikany, fahamendrehana ary maso izy ... izay tsy azo hadinoina. Noho izany, eto ambany izahay mamela anao hanana andian-tsary an'ity karazana saka mahavariana ity:
Sary - Keyword-suggestions.com
Sary - Pictures-of-cats.org
Sary - Cat-list.blogspot.com.es
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » York Chocolate saka, ilay volony te-ho pantera
Ahoana no hamantarana ny kaikitry ny parasy?
Inona no tokony hohanin'ny saka kely?